Governemanta tota no navadibadika
Namana daholo isika no ao, fa hialako tsiny, fa governemanta hitady seza, hitady vola, hitady fahefana ho an'ny tombotsoany manokana, ho an'ny tombotsoan'ny antokony sy ny Kandida tohanany, mpamadika ny Tolona nilokalokana.
mardi, 12 juin 2018 13:45
Asan-jiolahy: Voasambotra i Tsôlô sy ny namany
Raindahiny amin'ny fanendahana, vono olona ary vaky trano, nokarohina efa ela ary nampiaiky ny mponin'i Tsararano Ambony, Tsararano Nosikely, Ambalavola ary Fiofio izy sy ny ekipany.
Saron'ny polisy avy ao amin'ny Boriborintany faha-2 eto Mahajanga ny 9 jona teo izy efa-dahy ireo ny niaraka tamin'ny entana nangalariny sy ny vehivavy iray nampiantrano azy ireo teny amin'ny Cambil Port.
Fanakanan-dalana RN4: Olona 7 voasambotra
Tovolahy miisa 7 no voasambotra voarohirohy ho tompon'antoka tamin'ny raharaha fanakan-dalana teny amin'ny PK 36, RN4, teny Besely ao anatin'ny Kaominina Ambalakida, ny alin'ny 5 jona lasa teo, tokony ho tamin'ny 8ora alina.
Nirefotra ny basy tamin'io fotoana io. Soa fa tsy nisy ny naratra fa fiara 4x4 iray lasibatra no nisy fahasimbana.
Famaky sy lefona, antsy maranitra, basy poleta 1 sy basy vita gasy 2 no nampiasain'ireo dahalo nandritra ny asa ratsy nataony. 12 lahy no tena tompon'antoka tamin'ny asa ratsy fa mbola izy 7 lahy ireto no izao sarona izao.
Hatolotra ny Fampanoavana ireto tanora zazalahy ireto aorian'ny famotorana atao azy.
Korea Avaratra – Etazonia: Fihaonana manan-tantara eo amin'i Kim Jong-un sy Donald Trump
Manao dingana lehibe i Kim Jong-un sy Donald Trump. Arahina fifanaovan-tsonia fifanarahana ny fihaonana mivantana sy manan-tantara eo amin'ireo filoha roalahy, Korea Avaratra sy Amerika, ireo any Singapour.
mardi, 12 juin 2018 09:23
Sambava: Fitsidihana voalohany ataon’ny PM Ntsay Christian
Nigadona teto Sambava androany tamin’ny 8 ora maraina teo ny praiminisitra Ntsay Christian. Fitsidihana voalohany ataony ivelan’Antananarivo, taorian’ny nahaterahan’ny Governemanta vaovao ity.
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena amin’ny ady fampiasana zaza tsy ampy taona izao fitsidihana izao araka ny nambarany teo ampahatongavana teny amin’ny seranam-piaramanidina Ambodisatrana.
Mitarika adihevitra mikasika ny Ady amin’ny fampiasana ankizy tsy ampy taona izay tanterahina ao amin’ny Resto Capricorne izy amin’izao fotoana izao.